धनतेरसमा किन्नुहोस यी चीज, हुदैन धनको कमि!!! – Palika Express
धनतेरसमा किन्नुहोस यी चीज, हुदैन धनको कमि!!!
PalikaExpress २५ कार्तिक २०७७, मंगलवार 289 पटक हेरिएको
पञ्चाङ्गका अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्षको त्रयोदशीका अथवा काग तिहारका दिन धनवन्तरी त्रयोदशी अर्थात धनतेरस मनाउने गरिन्छ । धन त्रयोदशी र धनतेरस पनि यसै दिनलाई भन्ने गरिन्छ । यो दिन मूलतः आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरि र धनका देवता कुबेरको जन्मोत्सव मनाउने पर्व हो । धनतेरसको पर्व दिपावलीको पहिलो दिन हो। हिन्दु चन्द्र पात्रो अनुसार यो कृष्ण पक्षको तेह्रौं दिनमा मनाइन्छ जुन कार्तिक महिनामा पर्ने गर्दछ । ‘धन’ भनेको पैसा , सम्पत्ति हो र ‘तेरस’ भनेको तेह्रौं दिनको अर्थ हो। भक्तहरूले आयुर्वेदका भगवान, धन्वंतरीको पूजा गर्छन्।
धनतेरसका दिन धातुबाट बनेको गहना ,रत्न ,र कुनै घरेलु उपकरण जस्ता मुल्याबान बस्तुहरु किन्ने चलन पनि रहेको छ ।यो मानिन्छ कि “लक्ष्मी ल्याउनु” को अर्थ हो, धन र समृद्धि, घरमा लिएर आउनु हो भन्ने चलन छ । यसले आउँदो वर्षमा परिवारको लागि राम्रो भाग्य ल्याउनेछ। धेरै व्यक्तिहरू अटोमोबाईल र महँगो इलेक्ट्रोनिक्स खरीद गर्नका लागि यस शुभ दिनको लागि पूरै बर्ष पर्खन्छन्।
धनतेरसका दिन नेपालको तराई क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ भाँडाकुडा र सुनचाँदीका गरगहना किनमेल गर्ने परम्परा रही आएको छ ।धनतेरसको दिन सामानहरु किन्ने र दीपदान गर्ने दिन अर्थात् धनतेरस पर्व साथै काग तिहार पनि हो । यस दिन विभिन्न वस्तु घरमा भित्र्याउनाले वर्षभर धनको कमि नहुने धार्मिक मान्यता रहेको छ। जानेर बुझेर खरिद गरे देखि लक्ष्मीले कहिले साथ नछोड्ने विश्वास पनि रहेको छ । ज्योतिष शास्त्रीहरुका अनुसार धनतेरसमा निम्न उल्लेखित वस्तुहरु कसैलाई थाहा नदिइ घरमा भित्राउदा आर्थिक लाभ हुने गर्छ।
यो विश्वास गरिएको छ कि भगवान धन्वन्तरिले आयुर्वेदको ज्ञान दिएर मानवजातिलाई भयकर रोगहरूबाट छुटकारा दिन सहयोग गरेको किम्बदन्ति रहेको छ । आयुर्वेद, शताब्दीयौं देखि चलिरहेको छ, र अझै पनि संसारभरि रोगहरूको उपचार गर्न प्रयोग भइरहेको छ! यही कारणले गर्दा भारतीय आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध र होमियोपैथीले २८ अक्टूबर २०१६ को पहिलो पटक धनत्रेसको चाडलाई ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद दिवस’ को रूपमा घोषणा गरे।